Baarlamaanka Puntland oo xasaanadii Xildhibaannimo ka qaaday 8 mudane oo Baarlamaanka ka tirsan – Kalfadhi
Guddoomiyaha Baarlamaanka Puntland Abdirashid Yusuf Jibril iyo labadiisa ku-xigeen, ayaa maanta shir-guddoominayay fadhiga 20-aad ee Kalfadhiga 47 ee Baarlamaanka, kaas oo maanta xanaasadii xildhibaannimo looga qaaday siddeed mudane oo Baarlamaanka kamid ah.
Xildhibaannada xasaanada lagala noqday ayaa si weyn u mucaaradsanaa Guddoomiyaha Baarlamaanka C/rashiid Yuusuf, waxaana maalin ka hor ay sheegeen in Guddoomiyaha ay xilka ka qaadi doonaan.
Xeer-ilaaliyaha Guud ee Puntland Maxamuud Xassan Aw Cismaan ayaa golaha la wadaagay eed ka dhan ah 8-da xildhibaan, waxa uuna codsaday in xasaannada laga xayuubiyo si dacwad loogu soo oogo, isagoo ku eedeeyey inay ku xad-gudbeen Dastuurka DPL iyo Xeer-hoosaadka Golaha Wakiillada.
Xildhibaannada Baarlamaanka Puntland ayaa cod gacan taag ah u qaaday in Xildhibaannada laga qaado xasaanadda, waxaana gacanta u taagay 35 Xildhibaan, 3 mudane ayaa diiday halka hal xildhibaana uu ka aamusay.
Xildhibaannada xasaanada lagala laabtay ayaa kala ah:-
1.Xildhibaan Cabdijamal Cismaan